Inaad safar u baxdo - Maxay yihiin talooyinka ugu wanaagsan ee lagu dhaqmo? | Bezzia
Susana godoy | 14/01/2022 12:00 | safarka
Tag safar, arag meelo cusub oo ka jar Waa saddex shay oo aan inta badan jecelnahay oo wada socda. Intaa waxaa dheer, waa in la sheegaa inay sidoo kale runtii lagama maarmaan u yihiin caafimaadka dhimirkeena. Hadaba hadii aad ku fakarayso in aad safar gasho waxa fiican in aad wax walba hore u sii qorshayso si aanad waxba uga waayin.
Marka laga soo tago, waanu idiinka tagaynaa talooyinka ugu fiican si aad u dhaqan geliso. Talo aad u faa'iido badan oo aan naqaan laakiin aan mar walba ogaanin ilaa ay goori goor tahay. Markaa, liiska waanu kuu samaynay. Waxa kaliya ee kugu hadhay inaad si degan u akhrido oo aad si fiican u qorto. Fasax wanagsan!
1 Lacagta oo dhan hal meel ha wada qaadan
2 Ku sharad inaad ogaatid meelaha dhow
3 Baaritaan samee ka hor intaadan tagin
4 Haddii aad rabto inaad wax kaydsato, noqo mid dabacsan
5 Ha xidhin dhar aad u badan si aad safar u baxdo
Lacagta oo dhan hal meel ha wada qaadan
Wax dhib ah ma leh habka gaadiidka aan u isticmaaleyno safarka. Waxa ugu fiican ayaa ah inaadan waligaa lacagta oo dhan ku qaadan hal meel. Waxa aad ku qaadan kartaa wax jeebadahaaga iyo in yar oo shandad ah, iwm. Sidan oo kale waxaanu hubin doonaa in, dhacdo lama filaan ah, aynaan wax walba lumin. Waa run in lacagta debecsan ay tahay inaynu wax qaadno laakiin aad uma badna. Had iyo jeer waxaa lagula talinayaa inaad haysato kaar laga yaabo inaadan lacag badan haysan laakiin aad haysato ku filan safarka mana aha meesha aad ka leedahay kharashyada caadiga ah ama biilashaada kale. Dabcan, mar walba suurtagal ma aha in la haysto wax ka badan hal mana aha mid lama huraan ah sidoo kale.
Ku sharad inaad ogaatid meelaha dhow
Waa run in haddii ay na weydiiyaan safarka riyadeena ama meesha aan rabno in aan aadno, waxay ku riyoon doonaan magacyo fog sida qaanuunka guud. Hagaag, waa in la sheegaa marar badan Waxaan heli doonaa yaabab waaweyn haddii aan ku sii dhowaanno meesha aan ku nool nahay. Sababtoo ah sidoo kale waxaa nagu hareereysan bulshooyin iyo magaalooyin si aan u sahamno. Intaa waxaa dheer, waxaan hubnaa inaan sidoo kale heli doono dalabyo waaweyn maadaama aysan ahayn meelaha dalxiiska gaar ahaan.
Baaritaan samee ka hor intaadan tagin
Haddii aakhirka lagu kaxeeyo meeshan fog, markaa waxaa habboon in wax yar laga baadho. Hadda waxaan ku haynaa tignoolajiyada farahayada iyo gujisyada Waxaan ogaan karnaa dhammaan caadooyinka, gastronomykeeda iyo meelaha ugu badan ee la soo booqdo. Markaa, dhib ma leh inaad keento wax qorshaysan oo ku saabsan waxa aad booqanayso. Haa, waa run in mar haddii ay jiraan, qorshayaashani ay isbeddeli karaan iyadoo ku xiran xilliga la joogo, laakiin ugu yaraan, waxaan ka fikiri karnaa qaar ka mid ah geesaha ay tahay in la arko.
Haddii aad rabto inaad wax kaydsato, noqo mid dabacsan
Qodob kale oo muhiim ah marka aad safar samaynayso waa in la rabo in la badbaadiyo kharashyada. Waa hagaag, haddii aad rabto inaadan ku bixin lacag badan oo kaliya safarka, markaa waa inaad noqotaa mid dabacsan marka la eego maalmaha ama saacadaha guud ahaan. Sababtoo ah haddii aad raadiso maalin gaar ah oo aan aadno dhamaadka usbuuca, qiimuhu wuu kici doonaa. Isla sidaas oo kale ayaa ku dhacda meelaha qaar, waana sababta aan mar hore kuugula talinnay inaad sharad ku gasho meelaha u dhow ama meelaha aan si fiican loo aqoon sida kuwa aan maskaxda ku hayno.
Ha xidhin dhar aad u badan si aad safar u baxdo
Mid ka mid ah daqiiqadaha ugu cabsida badan ayaa ah waqtiga wax lagu duubo. Sababtoo ah waxay u muuqataa inaan u baahanahay wax kasta iyo wax ka badan, laakiin markaa waxaan isticmaalnaa wax ka yar kala badh. Haddaba, iyadoo ku xiran xilliga waxaan xiran doonaa dharka aasaasiga ah iyo kabo aad u raaxo leh maalinta iyo mid aan u baahan karno caawa. Way fiicantahay in lagu sharadeeyo fikradaha aasaasiga ah ee hadhow bedeli kara qaabka oo na siiya muuqaal labaad kaliya adoo ku daraya qalabyada. Wax ku dhacaya maro madow, ama jooniska iyo shaati cad, tusaale ahaan. Hadda waxa hadhay oo dhan waa inaad ku raaxaysato haddii aad safar u baxayso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » nololeedka » safarka » Talooyinka ugu fiican ee safarka
Caadooyinka caafimaadka qaba ee kaa caawinaya inaad fiicnaato